VATSIN’ANKOHONANA | NewsMada
Miseholany ny fanodinkodinana amin’ny endriny maro eto amin’ny tany sy ny firenena. Tafiditra ao anatin’izany ireo karazana tetikasa hanampiana ireo olona tena marefo. Aiza ny fandraisana andraitry ny fanjakana ?
Ireo solontenan’ny mponina avy any amin’ny Distrikan’Ambovombe.
Anisan’ny nohirahirain’ny fitondram-panjakana ho fanampiana ny vahoaka ny resaka tetikasa « Vatsin’ankohonana ». Velon-taraina omaly, ny sefo fokontany avy any Antanimora Central, anatin’ny distrikan’Ambovombe fa misy ny fanodinkodinana ataon’ny tomponandraikitra any ifotony mahakasika io tetikasa « Vatsin’ankohonana » io. Ny mpamatsy vola avy amin’ny alalan’ny Pam no fantatr’izy ireo fa manampy ny fanjakana, ny fanjakana kosa, manome azy amin’ny Fikambanana Miaro. Nambaran’ny sefo fokontany any an-toerana, Laha Christophe, omaly teny Andrefan’Ambohijanahary fa manangona ireo olona marefo ny fokontany, saingy rehefa tonga avy amin’ny tomponandraikitry ny fikambanana, miova ny lisitr’ireo olona tena marefo ireo. Mampaneno lakolosy, araka izany, ny sefom-pokontany any an-toerana miaraka ireo solontenan’ny fokonolona any amin’iny distrikan’Ambovombe iny, manoloana izao fanodinkodinana miseholany ny resaka vatsin’ankohonana, izay lazaina fa hanampiana ireo olona tena marefo izao.
Raha ny voalazan’ireto solontenan’ny mponina avy any amin’ny distrikan’Ambovombe ireto ihany, mitentina 120.000 ariary ny fanampiana avy amin’io Vatsin’ankohonana io. Ho an’i Laha Christophe, sefom-pokontany any an-toerana, miisa 111 ireo olona marefo izay natambatra tamin’ny lisitra iray nasaina nangoniny. Rehefa nandeha ny famoahana ny lisitra, olona marefo 103 sisa, ary mbola misy beantitra tena sahirana miisa 21 indray nesorin’izy ireo. « Olona matanjaka sy mirijarija be fa tsy marefo izany no nanoloana azy ireo. Tafiditra ao anatin’izao fanodinkodinana tsy mazava izao, ny fikambanana Miaro, sy orinasan-tserasera iray », raha ny filazany hatrany.
Mampanontany tena azy ireo, araka izany, hoe : Iza marina no tena homena ny vola ? Fanampin’izay, mbola mizara roa koa ny fanomezana io vola io satria 60.000 ariary isan-tapa-bolana no azo. Nambarany fa tsy eo amin’ny fokontany iadidiany ihany no isehoan’izao trangan-javatra mampalahelo tahaka izao, fa mbola ahitana izany koa ny ao amin’ny fokontany hafa tahaka ny fokontany ao Onilahy, Andaivozana sy ny maro hafa…Tsy misy ny fanaraha-maso momba ireny fanampiana avy any ivelany ireny. Gaboraraka ny fitantanana ka samy manao izay danin’ny kibony avokoa ireo tomponandraikitra isan-tsokajiny. Taratry ny fitantanana goragora ve izao raharaha izao satria tetikasan’izao fitondrana izao ?